ရန်ကုန် သီလဝါတွင် တွေ့ရသော လေယာဉ်ဆီ သိုလှောင်ကန် တချို့ / ဧရာဝတီ
By မျိုးပပစန်း 16 June 2018
ပြည်တွင်း၌ လေယာဉ်ဆီ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချရန် အတွက် ကုမ္ပဏီသစ် ၂ ခုကို ခွင့်ပြု ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း လေ ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သိရသည်။
လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဒု ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲထွဋ်အောင်က “ရွှေမြန်မာ လေကြောင်း (GMA) ကုမ္ပဏီ ကိုတော့ ဝန်ကြီးရုံးကို တင်လိုက်ပြီ။ Yangon Aerodrome Co.,Ltd. ကုမ္ပဏီကတော့ ခွင့်ပြုချက် ကျပြီး သား ဖြစ်တယ်”ဟု ပြောပြသည်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ “ဒါကြောင့် Yangon Aerodrome Co.,Ltd. ကုမ္ပဏီကတော့ လွဲှပေးထားပြီးသား လုပ်ခွင့်ရှိပြီး သား။ သူတို့က အခုဘယ်နေရာမှာ ဆီသိုလှောင်ရုံ ဆောက်မယ်။ ပိုက်လိုင်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုသယ်မယ်။ ကားတွေနဲ့ ဘယ်လို သယ် ပို့မယ်။ အဲဒါတွေ လိုသေးတယ်။ လုပ်ငန်းကို ဘယ်အချိန် စတင်နိုင်မယ်တော့ မသိသေးဘူး။ သူတို့လုပ်နိုင်မယ့် အပေါ် မူတည်တယ်” ဟုလည်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ လေယာဉ်ဆီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမည့် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူများ အနေနှင့် လေဆိပ်၌ ဆီသိုလှောင်နိုင်သော ကန် များရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) လေယာဉ်ဆီတင်သည့် ကားဖြင့် လေဆိပ်သို့ ပို့နိုင်မည့် သယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေး လုပ်နိုင်ရမည် ဖြစ် ကြောင်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
“ဒီလို အပြိုင်အဆိုင် ဈေးကွက်ရှိလာမယ် ဆိုရင် လေယာဉ်ဆီ ဈေးနှုန်းတွေလည်း ကျနိုင်တာပေါ့။ တကယ် လုပ်နိုင်ဖို့ပဲ လိုတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယင်းသို့ လေယာဉ်ဆီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရန် အတွက် တင်ပြလာသော ကုမ္ပဏီများအနေနှင့် ဆီသယ်ယူပို့ဆောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်း ကိစ္စရပ်များတွင် ပြည့်စုံခြင်း ရှိ မရှိ ၊ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်မည့် Business Plan ရေးဆွဲထားမှု အခြေအနေ စသည် တို့ကို စိစစ်ပြီး ဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
“ဘယ်လိုမျိုး လုပ်မယ်။ ဆီတိုင်ကီတွေကို ဘယ်လို ထားမယ်။ ဆီဘောက်ဇာတွေကို ဘယ်လို ဝယ်မယ်။ ဆီကို ဘယ်က နေ ဝယ်မယ်။ ဘယ်လောက်နဲ့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမယ်။ ဒါတွေကို ကြည့်ပါတယ်။ ဒါတွေကြည့်ပြီးရင် ဝန်ကြီးရုံးကို တင်ပြမယ်။ ဝန်ကြီးရုံးကလည်း စိစစ်လို့ လုပ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆရင် အစိုးရအဖွဲ့ကို တင်ပြမှာဖြစ်တယ်” ဟု ဒု ညွှန်ချုပ် ဦးရဲထွဋ်အောင် က ပြောသည်။
အစိုးရအဖွဲ့ကတဆင့် ခွင့်ပြုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ (MIC) ၏ ခွင့်ပြုချက် လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထား ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
MAI လေကြောင်းလိုင်းမှ Head of Marketing & Public Relations ဒေါ်အေးမရသာက “လေယာဉ်ဆီဈေးက မြင့်တော့ ပြည်ပ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်း ဆွဲတဲ့ လေကြောင်း လိုင်းတွေရောက စရိတ်တွေ ကြီးမြင့်နေတယ်။ နောက်တခုက ခရီးသွား ရာသီ မဟုတ်တော့ နိုင်ငံခြားသားတွေ များများလာအောင် ပရိုမိုးရှင်း လုပ်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆီဈေးနှုန်းက ကြီးမြင့် နေ တော့ မရဘူးပေါ့” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက “တယောက်တည်း ရောင်းချနေတာထက် စာရင် အပြိုင်အဆိုင် ရှိလာမယ်။ သုံးခုရှိလာမယ် ဆိုရင် တော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ ဈေးမျိုးပဲ ရောင်းလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။ လေကြောင်းလိုင်းတွေ အတွက် ပိုပြီး အဆင် ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို လေယာဉ်ဆီ ရောင်းချမယ့် ကုမ္ပဏီတွေ ရှိလာဖို့ နည်းနည်းတော့ လိုဦးမယ် ထင် တယ်။ သူတို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အဆင့်တွေက အများကြီး ကျန်သေးတယ်”ဟုလည်း ပြောဆိုသည်။
လေကြောင်းလိုင်း တခု၌ မည်သည့် စရိတ်က ကုန်ကျမှု အများဆုံး ဖြစ်သနည်းဟု တွက်ချက်ကြည့်ရာ လေယာဉ်ဆီ ဈေးနှုန်း စရိတ်မှာ အကြီးမြင့်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အေးမရသာ က ပြောသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် လေယာဉ်ဆီ ဈေးနှုန်းမှာ ၁ ဂါလန်လျှင် ၁ ဒေါ်လာခန့် ကြီးမြင့်နေသဖြင့် ပြည်တွင်း လေကြောင်းလိုင်းများမှာ အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ လေယာဉ်ဆီ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်ကို လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်ထားသည့် NEPAS (National Energy Puma Aviation Service) ကုမ္ပဏီက၂၀၁၅ မှစတင်၍ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီး လေယာဉ်ဆီများကို စင်ကာပူနိုင်ငံမှ တဆင့် တင်သွင်း၍ ပြန်လည် ရောင်းချခြင်း ဖြစ်သည်။
Topics: လေယာဉ်ဆီ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခွင့်